Antoine Griezmann oo ka mid ah labo xiddig oo ay si dhab ah u doonayso kooxda Barcelona kaddib markii laga soo reebay Champions League – Gool FM
(Barcelona) 10 Maajo 2019. Kooxda kubadda cagta Barcelona ayaa la soo warinayaa inay si dhab ah u xiisanayso Weeraryahanka naadiga Atletico Madrid ee Antoine Griezmann iyo difaaca kooxda Ajax ee Matthijs de Ligt.
Catalan ayaa aad u jecleysanaysay inay la soo wareegto bilihii dhowaa, laakiin sida ay warinayso Jariiradda AS ee ka soo baxda Spain xiisaha ay u hayso labadaan ciyaaryahan ayaa sare u kacay kaddib markii ay si layaab leh uga soo hareen isbuucaan tartanka Champions League.
Barca oo lugtii hore ee afar dhammaadka Champions League ku soo adkaatay 3-0 ayaa guuldarro 4-0 kala soo kulantay Liverpool oo ay booqatay, taasoo ka dhigan in cel-celis ahaan labada lugood looga saaray tartanka Koobka horyaallada Yurub goolal dhan 4-3.
Arrintaasi waxaa kale oo ay shaki weyn gelisay mustaqbalka macallin Ernesto Valverde ee kooxda, waxaana warbixinta lagu sheegay in Barcelona ay indhaha ku hayso haatan inay xoojiso shaxdeeda, iyadoo doonaysaa inay la soo wareegto De Ligt iyo Griezmann.
De Ligt ayaa horay ugu jiray qorshaha suuqa kala iibsiga xiddigaha ee kooxda Barcelona, laakiin naadiga ku guuleysatay horyaalka Spain ayaan hoos u dhigi doonin dadaalka ay ku bixinayso sidii ay kula soo saxiixan halayd difaacaan dhexe, halka sidoo kale Barca ay qorsheynayso inay soo iibsato Griezmann oo ay waqti dheer ku raad-joogeen kaddib guuldarradii ku soo gaartay garoonka Anfield.